"Indro, izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka Anao" - Mar. 10:28.
Misy olona tso-po sy tsara fikasana izay tsy mandroso eo amin'ny fiainana kristianina satria tsy takatr'izy ireo ny maha-zava-dehibe ny fianarana tsy tapaka amin'i Jesôsy . Fony vao niova fo izy ireo dia faly satria niandany tamin'ny Tompo. Herintaona taty aoriana dia tsy niova ny fijoroana ho vavolombelona ataony. Tsy hita soritra ny fitomboany ara-panahy; mbola marefo toy ny zaza ihany izy (...) Mahafaly sy maharavo ny fanandramana voalohany ataon'ny olona vao niova fo. Tonga anefa ny fitsapana, tsy maintsy atrehina ny adim-piainana, mitady hanjaka ireo lafin-toetra tsy voafehy izay mbola itoeran'ny fahotana, ary mazana maharesy izany. Mihavery ny fitokiana sy ny fiadanam-po, mihena ny fitiavam-bavaka sy ny famakiana ny Soratra Masina. Noho ny tsy fananany fahalalana sy fanandramana, dia maro no resin'i Satana. Tsy hain'izy ireo ny mamantatra ny fakam-panahiny sy ny manohitra izany (...)
Minoa an'i Jesôsy ilay Mpamonjy anao. Tsarovy fa tsy anjaranao ny mifidy ny asa tokony hataonao, na ny manao araka izay fomba heverinao fa mety. Aoka kosa ianao hibanjina an'i Jesôsy amin'ny maha-mpitari-dalana sy ohatra Azy. Ataovy eo anatrehanao mandrakariva ny ohatra asehony, ary anontanio Azy mandrakariva izay ankasitrahana eo imasony. Ianaro Aminy ny lesona momba ny fandavan-tena sy ny fahafoizan-tena. — YI, 05 Desambra 1883
Miambena mandrakariva, ary afantohy amin'Andriamanitra mandrakariva ny sainao, mba tsy hitoeran'ny fiahiana ny amin'ny fitafiana, na ny fahoriana na ny avonavona ao am-ponao. Miezaha handà tena, aoka ho masina, saino mandrakariva ny zavatra any ambony, ary aoka ho izany koa no anton-dresakao (...) Hisafidy ny fandavan-tena sy ny fahafoizan-tena ny mpanara-dia an'i Kristy, ary hahazo fankasitrahana ankehitriny (...) sy voninahitra, sy tsy fahafatesana, ary fiainana mandrakizay rahatrizay. — YI, 01 May 1854.